Yini iBounce Rate? Ungasithuthukisa Kanjani Isilinganiso Sakho Sebheshi? | Martech Zone
Yini iBounce Rate? Ungasithuthukisa Kanjani Isilinganiso Sakho Sebheshi?
Isilinganiso se-Bounce singenye yalawo ma-KPI abathengisi bedijithali abachitha isikhathi esiningi behlaziya futhi bezama ukuthuthuka. Kodwa-ke, uma ungakuqondi kahle ukuthi kuyini ukubhampa, ungahle wenze iphutha ngendlela ozama ngayo ukuthuthuka. Ngizohamba ngencazelo yesilinganiso sokuqhuma, amanye ama-nuances, nezindlela ezithile ongathuthukisa ngazo isilinganiso sakho se-bounce.
Incazelo Ye-Bounce Rate
A bounce yiseshini yekhasi elilodwa kusayithi lakho. Ku-Analytics, i-bounce ibalwa ngqo njengeseshini esidala isicelo esisodwa kwiseva ye-Analytics, njengokuthi lapho umsebenzisi evula ikhasi elilodwa kusayithi lakho bese ephuma ngaphandle kokubangela ezinye izicelo kwiseva ye-Analytics phakathi naleso sikhathi.
Ukukala ngokunembile isilinganiso se-bounce, kufanele sithathe inani eliphelele lama-bounces futhi sikhiphe ukuvakashelwa okubhekiswe kubhulogi kuya kuwebhusayithi yenkampani. Ngakho-ke - ake sihambe ngezimo ezithile zokuqhuma:
Isivakashi sihlala kokuthunyelwe kubhulogi, asinantshisekelo kokuqukethwe, futhi sishiya isiza sakho. Lokho kuyibhampasi.
Isivakashi sihlala ekhasini lokufika bese sichofoza ukubizelwa esenzweni ukubhalisela uhlelo lwakho lokusebenza. Lokho kubayisa kusayithi elingaphandle kusizinda noma isizinda esihlukile esisebenzisa ama-akhawunti ahlukile we-Google Analytics. Lokho kuyibhampasi.
Isivakashi sihlala esihlokweni esivela kumphumela wosesho lapho ikhasi lakho likleliswa khona kakhulu… ngenxa yetemu elingasebenzi kumikhiqizo noma kumasevisi akho. Bacindezela inkinobho yokubuyela emuva kusiphequluli sabo ukuze babuyele kumiphumela yosesho. Lokho kuyibhampasi.
Imicimbi Ingenza Amanani Amabhola Abe Zero
Izinga lokuncipha ngokuvamile libhekwa njengesilinganiso esikhombisa isivakashi sokuqala ngqá lwekucocisana kuwebhusayithi… kepha udinga ukuthi uqaphele. Nasi isimo esingakumangaza:
Ulungiselela izibalo umcimbi ekhasini… njengenkinobho yokudlala icindezelwa, skrolela umcimbi, noma i-popup div eyenzekayo.
Umcimbi, ngaphandle kokuthi ucaciswe njenge- umcimbi ongasebenzelani, ngobuchwepheshe lwekucocisana. Abakhangisi bavame ukufaka imicimbi emakhasini ukuze babheke ngokucophelela ukuthi izivakashi zixhumana kanjani nezinto ezisekhasini noma lapho izinto zivela ekhasini. Imicimbi iyabandakanyeka, ngakho manjalo babona amazinga e-bounce ehla aya kuziro.
Bounce Rate Ukuqhathanisa Phuma Rate
Ungadidanisi i-Exit Rate ne-Bounce Rate. Izinga lokuphuma licacisiwe ekhasini elilodwa kusayithi lakho nokuthi isivakashi sishiye lelo khasi saya kwelinye ikhasi (kusayithi noma kuvaliwe). I-Bounce Rate icaciswe ekhasini lokuqala lapho isivakashi sihlala khona ngaphakathi kweseshini abayitholile kusayithi lakho… nokuthi bashiye isiza sakho ngemuva kokuvakashela.
Nayi imininingwane ethile phakathi kwe- Isilinganiso Sokuphuma futhi Isilinganiso se-Bounce ekhasini elithile:
Kuko konke ukubukwa kwamakhasi ekhasini, Isilinganiso Sokuphuma yiphesenti okwakungu- okokugcina esimisweni.
Kuzo zonke izikhathi eziqala ngekhasi, Isilinganiso se-Bounce yiphesenti okwakungu- kuphela esinye seseshini.
Isilinganiso se-Bounce ekhasini lincike kuphela kumaseshini aqala ngalelo khasi.
Ukuthuthukisa Ukuncipha Kwezinga Kungalimaza Ukuzibandakanya
Umthengisi angalithuthukisa izinga labo lokuqothula futhi aqede ukuzibandakanya kusayithi labo. Cabanga ngomuntu ongena ekhasini kusayithi lakho, afunde konke okuqukethwe kwakho, futhi ahlele idemo nethimba lakho lokuthengisa. Abakaze bachofoze okunye ekhasini… bafika nje, bafunda izici noma izinzuzo, bese bathumela umthengisi nge-imeyili.
Lokho ngobuchwepheshe a bounce… Kodwa ngabe bekuyinkinga ngempela? Cha, akunjalo. Lokho ukuzibandakanya okuhle! Ukuthi nje okunye kwakho kwenzeke ngaphandle kwekhono lama-analytics lokuthwebula umcimbi.
Abanye abashicileli behlisa ngamabomu amazinga okubuyisa ukuze babukeke kangcono kubakhangisi nabaxhasi. Benza lokhu ngokuhlukanisa okuqukethwe kumakhasi amaningi. Uma umuntu kufanele achofoze ngamakhasi ayi-6 ukuze afunde i-athikili yonke, uphumelele ekwehliseni isilinganiso sakho sokuncipha KANYE nokukhulisa ukubuka kwakho kwekhasi. Futhi, leli iqhinga lokukhulisa amanani akho wokukhangisa ngaphandle kokungeza inani noma umzamo esivakashini sakho noma kumkhangisi wakho.
Le ndlela iwumbhedo futhi angiyincomi… yabakhangisi noma izivakashi zakho. Okuhlangenwe nakho kwesivakashi sakho akufanele kunqunywe ngezinga lokuncipha kuphela.
Ukuthuthukisa Bounce Rate Yakho
Uma ungathanda ukwehlisa izinga lakho lokushaya ngempumelelo, kunezindlela ezimbalwa engingazincoma:
Bhala okuqukethwe okuhleleke kahle nokwenziwe kahle okuhambisana nalokho izithameli zakho ezikufunayo. Sebenzisa amagama angukhiye ngempumelelo ngokwenza ucwaningo oluthile ukuthi yimaphi amagama asemqoka adonsela abantu isiza sakho, bese uwasebenzisa ezihlokweni zekhasi lakho, izihloko zeposi, ama-post-slugs, nokuqukethwe. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi izinjini zokusesha zikukhomba ngokufanele futhi ngeke ube namathuba okuba nezivakashi zifike kusayithi lakho ezingenandaba futhi ezishayayo.
Sebenzisa izixhumanisi zangaphakathi kokuqukethwe kwakho. Uma izilaleli zakho zifike kusayithi lakho zizosesha okuthile - kepha okuqukethwe akufani - ukuba nezixhumanisi zezihloko ezihlobene kungasiza ukugcina abafundi bakho. Ungahle ufune ukuba netafula lenkomba elinamabhukhimakhi asiza abantu ukuthi bagxumele phansi ezihlokweni ezithile ezithile noma izihlokwana ezithile (ngokuchofoza ibhukumaka ukubandakanyeka).
Khiqiza ngokuzenzakalela okuthunyelwe okususelwe kukumaka noma amagama angukhiye. Kubhulogi lami, ngisebenzisa Okuthunyelwe okuhlobene kukaJetpack feature futhi yenza umsebenzi omuhle wokunikeza uhlu lokuthunyelwe okwengeziwe okuhlobene namathegi owasebenzisele okuthunyelwe kwakho kwamanje.
Usebenzisa i-Google Tag Manager, ungakwazi kalula kubangele imicimbi yokuskrola ekhasini. Masibhekane nakho… umsebenzisi ohamba ngekhasi lwekucocisana. Vele, uzofuna futhi ukuqapha isikhathi sakho esizeni kanye namamethrikhi wokuguqula jikelele ukuze uqinisekise ukuthi umsebenzi ulusizo kuzinjongo zakho zizonke.
Ukususa ama-Bounces Okuyi-Engagement yangempela
Uyasikhumbula isimo sami esingenhla lapho ngishilo khona ukuthi othile ungene kusayithi lakho, wafunda leli khasi, wabe esechofoza indawo engaphandle ukuze abhalise? Ungenza izinto ezimbalwa ukuqinisekisa ukuthi lokhu akubhalisiwe njenge-bounce kusayithi lakho:
Hlanganisa umcimbi ngokuchofoza kwesixhumanisi. Ngokwengeza umcimbi, usanda kususa i-bounce lapho isivakashi sichofoza lapho ungathanda ukuthi baye khona. Lokhu kungenziwa nge- chofoza-ukubiza noma chofoza ku-imeyili izixhumanisi futhi.
Faka ikhasi eliqondisa kabusha ngaphakathi. Uma ngichofoza ubhalise bese ufika kwelinye ikhasi langaphakathi elilandela ukuchofoza futhi liqondise umuntu ekhasini langaphandle, elizobalwa njengokunye ukubuka kwekhasi hhayi ukubhampa.
Gada Bounce Rate Amathrendi Wakho
Ngingancoma kakhulu ukuthi ugxile kuzinga lokushaya ngokuhamba kwesikhathi kunokukhathazeka ngesibonelo salo lapha nalaphaya. Usebenzisa amasu angenhla, ungabhala ushintsho ngaphakathi kwe-analytics bese ubona ukuthi izinga lakho lokubhampa lithuthuka kanjani noma ngabe liya ngokuya liba limbi. Uma ukhulumisana nababambiqhaza ngezinga lokubuyisa njenge-KPI, ngincoma ukwenza izinto ezimbalwa kunqubo.
Khulumisana nokuthi yiliphi izinga lokuncipha kubabambiqhaza.
Khulumisana ngokuthi kungani amanani entengo okungenzeka ukuthi abengeyona inkomba enhle ngokomlando.
Dlulisa inguquko ngayinye enkulu ngesilinganiso sokuncipha njengoba ungeza imicimbi kusayithi lakho ukuqapha kangcono ukuzibandakanya.
Bheka ukuthambekela kwesilinganiso sakho sokuhamba kwesikhathi futhi uqhubeke nokwenza kahle ukwakheka kwesiza sakho, okuqukethwe, ukuzulazula, ukubizelwa esenzweni, nemicimbi.
Okusemqoka wukuthi ngincamela ukuthi izivakashi zifake ikhasi, zithole konke ezikudingayo, futhi zihlanganyele nami noma zihambe. Isivakashi esingabalulekile asiyona into embi. Futhi isivakashi esihilelekile esiguqukayo ngaphandle kokushiya ikhasi elikuso akusona isikhubekiso esibi, futhi. Ukuhlaziywa kwesilinganiso sokuncipha kudinga nje umsebenzi omncane owengeziwe!
Tags: Ama-Analyticsbounceizinga lokunciphisaI-google analytics
Nov 29, 2009 ngo-1: 30 PM
Angikaze ngicabange ukwenza noma yini efana nalezi zindlela zokukopela ukukhulisa ukubukwa kwamakhasi. Nginezinga eliphansi lokushaya esizeni sami esivele ngakho-ke njengoba kungeyona inkinga enkulu ngicabanga ukuthi angikudingi ukucabanga ngakho!
Ngokuqondene nezindlela ezinconyiwe, bengilokhu ngisebenzisa okuthunyelwe okuhlobene i-plugin isikhashana manje futhi nakanjani kukhulisa ukubukwa kwamakhasi. Anginakho ukuxhumana kwami ​​kokuqukethwe okulungiselelwe okwamanje.
Engikuthumele muva nje Ibhokisi Lamantombazane Elincane Lezimfihlo